February 14, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
အသကျ(၈၈)နှဈအရှယျရှိ ကြောငျးဆရာမကွီး၏ နအေိမျ မီးလောငျးရာ စုဆောငျးထားငှေ(၄၇)သိနျး မီးလောငျပကျြစီး
မြင်းခြံမြို့၌ နေထိုင်သည့် အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာမကြီး၏ နေအိမ် မီးလောင်ခံရ၍ စုဆောင်းထားငွေ(၄၇)သိန်း မီးလောင်ပျက်စီးသွားကြောင်း ဆရာမကြီး၏ တပည့်ဖြစ်သူ ဦးချင်းကိုကိုကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃)ရက်နေ့ ညနေ(၅)နာရီအချိန်ခန့်၌ မြင်းခြံမြို့၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်ရာ ဆရာမကြီးနေထိုင်သည့် နေအိမ်ကို မီးကူးဆက် လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။မီလောင်နေချိန်၌ အနီးရှိ ဘော်ဒါမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများမှ ကူညီမှုကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောင်ရာရပ်ကွက်ကို မီးသတ်မှ မီးငြိမ်းသတ်ပြီးနောက် ဆရာမကြီးနေထိုင်သည့် ကုတင်အောက်ရှိ သေတ္တာအတွင်း၌ ထည့်ထားသည့် မီးလောင်သည့် ငွေ(၄၇)သိန်းကို တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ဆရာမကြီးအိပ်တဲ့ကုတင်အောက်မှာရှိတဲ့သေတ္တာထဲထည့်ထားတာ။သူ့အစည်းနဲ့သူပေါ့။ဆေးကုဖို့၊လှူရေး၊နာ ရေးအတွက် သူ့အစည်းနဲ့သူထားတာ။အခုက ငွေစက္ကူအထုပ်ရဲ့ အလယ်ကနေလောင်တော့ Read more
ပုဂံမှာရိုက်တဲ့ ညစ်ညမ်းဗွီဒီယို မြန်မာတွေ ဒေါသထွက် မြန်မာနိုင်ငံက အထင်ရှားဆုံး သမိုင်းဝင်နေရာတခုလည်းဖြစ်၊ ဘာသာရေးအရ အထွတ်အမြတ် ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် UNESCO အဖွဲ့ကြီးက ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုဂံမြေမှာ ၁၂ မိနစ်ကြာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ညစ်ညမ်းဗွီဒီယို ထွက်လာတဲ့အပေါ် မြန်မာတွေအကြား အမျက်ဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ အီတလီနိုင်ငံသားတွေလို့ ဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ နားသန်သီးတွေဆွဲပြီး ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့ အဲဒီ စုံတွဲက သူတို့ရဲ့ ဗွီဒီယိုကို Yeees Yeees Yeees လို့ အမည်ပေးထားပြီး Read more
စိနျချေါသူနဲ့ ထိုးဖို့လကျမှတျထိုးခဲ့ပွီး ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိတယျဆိုတဲ့ အောငျလအနျဆနျ
မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရထားတဲ့ အပြင် တကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာရှိတဲ့ MMA Fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကိုတော့ တော်တော်များများလည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူထိုးခဲ့တဲ့ ပွဲတိုင်းကို အနိုင်ယူထားပြီး သူ့ရဲ့ Champion ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့ Fighter လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အောင်လအန်ဆန်ကိုတော့ စိန်ခေါ်သူ ပေါ်လာပြီး မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ဖို့အတွက် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ကို စိန်ခေါ်သူကတော့ နယ်သာလန် Read more
ဒီနလေ့ေးကတော့ ခဈြသူတှအေတှကျပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ ခဈြသူမြားနလေ့ေးဖွဈပွီးတော့နနေဲ့လ‌ရှနေဲ့မွလိုလိုကျဖကျညီတဲ့စုံတှဲတဈတှဲဖွဈပွီး တဈဦးနဲ့တဈဦးလညျး အမြားအားကရြလောကျအောငျ romanticဆနျတဲ့ ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျဖွဈ စမိုငျးလျတို့ဇနီးမာငျနှံကလညျး ခဈြသူစုံတှဲတှကေို အားကမြခံရိုပွလိုကျပွနျပါပွီနျော စမိုငျးလျဟာမကွာသေးမီက သူမရဲ့facebookစာမကျြနှာတှငျ သူမရဲ့ခဈြခငျပှနျးအတှကျ ခဈြသကျသဗေီဒီယိုလေးတဈခုတငျပေးလာပါတယျ။ သူမတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ အမွဲတဈယောကျကိုတဈယောကျကို ခဈြခငျကွငျနာစှာနဲ့နလေရှေိ့ကွပွီး romanticဆနျတဲ့ surpriseလေးတှလေညျးလုပျလရှေိ့သူနှဈဦးဖွဈပါတယျ။ စမိုငျးလျတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ ခဈြသူသကျတမျး(၂၁)နှဈတောငျရှိသှားခဲ့ပွီဖွဈပွီးလကျရှိမှာလညျး သမီးလေး(၂)ယောကျနဲ့ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုလေးကို လကျခံရရှိထားတဲ့ သူတှပေဲဖွဈပါတယျ။ Source-စမိုငျးလျ Smile’s Facebook page Zawgyi ချစ်သူသက်တမ်း(၂၁)နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Valentine’s dayနေ့လေးမှာ ချစ်သက်သေဗီဒီယိုလေးတင်ပေးခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ် ဒီနေ့လေးကတော့ ချစ်သူတွေအတွက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူများနေ့လေးဖြစ်ပြီးတော့နေနဲ့လ‌ရွှေနဲ့မြလိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလည်း Read more
သမီးမိုကျကိုခှငျ့လှတျပါဟု စာရေးသားခဲ့ပွီး အပြိုကွီးတဈဦး ကွိုးဆှဲခြ သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ အဖွဈ ……
ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ္တီလာမြို့နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက်နယ်မြေရှိအောင်မင်္ဂလာရပ်တွင်အသက်(၄၇)နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး(အပျိုကြီး)တစ်ဦးမှမိသားစုအားစာရေးသားထားခဲ့ပြီးမိမိကိုယ်ကိုကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရသည်ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃)ရက်နေ့ညနေ(၆း၃၀)အချိန်ခန့်မိတ္တီလာမြို့မရဲစခန်းဒုရဲအုပ်ထက်ဇော်ဌေးမှတာဝန်မှူးဆောင်ရွက်နေစဉ်နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက်နယ်မြေရှိအောင်မင်္ဂလာရပ်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြိုးဆွဲချသေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကျော်ထင် နယ်ထိန်းတက ဇော်သန်းတို့နှင့်သွားရောက်ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာအားသက်သေရာအိမ်မှူးများနှင့်အတူကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ အောင်မင်္ဂလာရပ်နေဒေါ်နုနုရီ(၄၇)နှစ်(အိမ်ထောင်မရှိ/အပျိုကြီး)(စိတ်ပုံမှန်မရှိသူ)မှာ၎င်း၏နေအိမ်နှစ်ထပ်တိုက်အပေါ်ထပ်ဘုရားခန်းတောင်ဘက် ပြတင်းပေါက်အမြင့်(၉)ပေခန့်ရှိပြတင်းပေါက်သံတိုင်တွင် အရှည်(၅)ပေခန့်ရှိယောဂီတဘက်အားချည်၍လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ်ပြုလုပ်လျက်ဦးခေါင်းနှင့်သံတန်း(၁)ပေခန့်အကွာလျှာထွက် ဒူးကွေးအနေအထားဖြင့်ခြေထောက်အောက်တွင်ပန်းရောင်ပလပ်စတစ်ခုံအားအသုံးပြူပြီးကြိုးဆွဲချသေဆုံးနေသည်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်ကြိုးဆွဲချသေဆုံးနေသူဒေါ်နုနုရီအလောင်းအနီးမှ”အမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေအပေါ်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်လို့ ဝမ်းနည်းပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့လို့ အခုလိုလုပ်လိုက်ရတာဘာ သမီးမိုက်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ ဟုစာတစ်စောင်ရေးသားထားခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်။ သေဆုံးသူအလောင်းအားမေတ္တာနိုင်လူမှုကူညီရေးယာဉ်ဖြင့်ရဲစခန်းဆေးစာနှင့်အတူပြည်သူဆေးရုံသို့ပို့အပ်ပေးပြီးဒေါ်နုနုရီသေဆုံးရခြင်းမှာဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ်/မဟုတ်သေဆုံးခြင်းသိရှိနိုင်ရေးအတွက်မိတ္တီလာမြို့မရဲစခန်းသေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ်(၃/၂၀၂၀)ဖြင့်ရေးဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ Copy ဝေ ယံ သင်္ဃန်းကျွန်း သင်္ဃန်းကျွန်း သတင်းစုံ
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေက သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ဘယ်နေရာမှာမှ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးချလို့ရတဲ့နေရာမှာ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သူများနေ့လေးမှာ တကယ်ကိုမွန်မြတ်လှတဲ့အလှူအတန်းလေးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါတွေကိုလည်း သူမရဲ့ ချစ်ရသူက တိုက်တွန်းပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေဟာ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်လုပ်လာခဲ့ပြီး ချို့တဲ့နေတဲ့ မိသားစုဘဝလေးတွေကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ အထောက်အပံ့တွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုရင် ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာကို တည်ထောင်ထားပြီး စွန့်ပစ်ကလေးငယ် မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကို မိဘအရင်းသဖွယ် ရင်နှင့်အမျှ မေတ္တာတွေအပြည့်အဝပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမရဲ့ ဂေဟာကြီးဆက်လက်တည်မြဲနေစေဖို့အတွက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက ဒီနေ့လို ချစ်သူများနေ့မှာ သေဆုံးသွားတဲ့အခါ Read more
“ခငျပှနျးဖွဈသူအပွငျ ခြောကလကျကြှေးမယျ့သူရှိနတေယျဆိုပွီး ခလြေိုကျတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု”
ပရိသတျတှေ သုသုလို့ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့မငျးသမီးလေးကတော့ သရုပျဆောငျပိုငျနိုငျရုံသာမက ခဈြစရာကောငျးတဲ့အပွုအမူလေးတှနေဲ့ ဖမျးစားတတျသူလေးပါ။ဒါရိုကျတာဏကွီးနဲ့လကျထပျထားပွီး အစစအရာရာအလိုလိုကျတဲ့ခငျပှနျးကွောငျ့ ကလေးဆနျနသေူလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။ တဈခါတလမှော သူတို့နှဈဦးရဲ့အမှတျတရတှေ အဖွဈအပကျြတှကေို ပွနျလညျမြှဝတေဲ့အခါ ပရိသတျတှပေါကွညျနူးရတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ဒီနဟေ့ာ ခဈြသူမြားနဖွေ့ဈတာကွောငျ့ ခဈြရသူတှကေို ခြောကလကျတှေ ပနျးစညျးတှပေေးလရှေိ့ကွတာပါ။သုသုကတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ပတျသကျပွီး “ဟိုလူကွီး!!!! ရှငျchocolate မကြှေးလညျးရတယျ…သူမြားကိုကြှေးတဲ့လူကွီးလူကောငျးလေးရှိတယျ…” ဆိုပွီးတော့တငျထားပါသေးတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ လကျမှတျဖိုးပှဲမှာ ကလေးလေးတဈယောကျကတော့ သုသုကို ခြောကလကျတှလောကြှေးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ကလေးဆီကတောငျ ခြောကလကျရတဲ့ သုသုကတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူကို ခပျခခြေလြေေးပွောလိုကျပါပွီ။ကလေးဆီကတောငျခြောကလကျတှရေနတေဲ့ သုသုလေးပါပဲနျော…. Source : PaingPhyoThu,Rose – CeleGabar ဇျောဂြီဗားရှငျးဖွငျ့ဖတျရနျ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအပြင် Read more
သုံးယောကျအတူတူ ခြောငျးသာကမျးခွကေို အလညျအပတျရောကျခဲ့ကွတဲ့ မွငျ့မွတျတို့ မိသားစုတှကေတော့ အာဟာရဒါနလေးတှနေဲ့ အားလုံးကိုပြျောရှငျအောငျ ဖနျတီးပေးလိုကျပါပွီ။ မွငျလိုကျတာနဲ့ သှားရညျကခြငျြစရာဟငျးတှမေို့ အားလုံးကလညျး ပွုံးပြျောနကွေပါ တယျ။ အိုးကွီးအိုးငယျ အသှယျသှယျနဲ့ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လှူတနျးနပေုံက တကယျ့ကိုပီတိဖွဈရပါတယျ။ သဘာဝမငျးသားဆိုတော့ လညျး ဘာဟနျဆောငျမှုမှမရှိပဲ ပကတိရိုးရှငျးလှနျးတယျနျော။ ကွညျနူးစရာမိသားစုလေးကို ပြျောရှငျအောငျ ဖနျတီးနိုငျတဲ့ ဖဖေမွေငျ့မွတျကွောငျ့ အပွုံးတှဝေဆောခဲ့ရတဲ့ မမေခေငျသူအောငျဟာ လညျး မိခငျကောငျးပီသပွီး အနအေေးတဲ့ ခဈြစရာအမြိုးသမီးလေးတဈယောကျပါ။ အဖတေူသားလေးမွတျသူကလညျး ဖဖေနေဲ့ မမေတေို့ရဲ့ငွိမျးခမျြးနှေးထှေးတဲ့ အခဈြတှအေောကျမှာ အကောငျးမှနျဆုံးနဲ့ အထူးခြှနျဆုံး ကွီးပွငျးလာခဲ့ပါတယျ။ မွငျသူတိုငျး Read more
မိနျးကလေးခငျြးကွိုကျနတေဲ့ LGBT တဈယောကျဆိုတာ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ခပြွလိုကျတဲ့ ထကျအဉ်ဇလီ
ထကျအဉ်ဇလီကတော့ ကယားသှေးနှောတဲ့ တိုငျးရငျးသူလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ ငယျစဉျကတညျးကမိဘတှနေဲ့အတူမနခေဲ့ရဘဲ အဘှားဖွဈသူနဲ့အတူ ဘဝကိုရုနျးကနျခဲ့ရသူဖွဈတာကွောငျ့ စိတျဓာတျမာကွောပွီး ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာသူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲကွီးရဲ့စဉျတဈလြှောကျလုံးမှာ တကျကွှလနျးဆနျးတဲ့ Performance တှနေဲ့ယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီးပရိသတျရဲ့အခဈြကိုသိမျးပိုကျထားနိုငျသူတဈယောကျပါ။ ထကျအဉ်ဇလီကတော့ ဒီနေ့ ခဈြသူမြားနလေ့ေးမှာ သူခဈြရတဲ့ခဈြသူကောငျမလေးနဲ့ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို ပရိသတျတှကေိုခပြွလိုကျပွီး“အေးဆေးဘဲ.. ဘာကွညျ့နတောလဲ.. အားကမြခံ အခုပဲ Mention ချေါပွီး ကိုယျ့အခငျြးခငျြးပဲ Ship လိုကျတော့လေ.. Happy Valentine’s Day” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ရိုမနျ့တဈဆနျဆနျရိုကျကူးထားတဲ့ပုံလေးတှနေဲ့အတူ မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ ထကျအဉ်ဇလီကတော့ သူ့ရဲ့အခဈြရေးကို ဒီနမှေ့ာခပြွလိုကျပွီး မိနျးကလေးခငျြးကွိုကျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈတယျဆိုတာ တကယျလားတမငျစနောကျနတောလားဆိုတာတော့ စဉျးစားစရာပါပဲနျော။ Source – Read more
Breaking News … စဈကိုငျး တံတားပျေါမှာ အလညျလောကျ မီးရထားတဈစငျး မီးလောငျနေ ( ရုပျသံ )
Breaking News … စစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝတံတား)ပေါ်မှာ အလည်လောက်မီးရထားတစ်စင်း မီးလောင်နေသည်ဟု ကနဦးသတင်းသိရသည် ။ credit zin moe unicode version Breaking News … စဈကိုငျးတံတား(အငျးဝတံတား)ပျေါမှာ အလညျလောကျမီးရထားတဈစငျး မီးလောငျနသေညျဟု ကနဦးသတငျးသိရသညျ ။ Video Player 00:00 00:00 Video Player 00:00 00:00 Credit – zin moe